Uboshiwe owetulo lokubulala unina | isiZulu
Uboshiwe owetulo lokubulala unina
Uboshiwe odale ingozi ebulale abadlali bebhola
Uboshiwe owadlwengula amthola ku-Mxit
Uboshiwe osolwa ngokubulala intombi
Durban - INkantolo yesiFunda eThekwini ichaze indlela umphakathi onengeke ngayo ngokwanda kwezehlakalo zokubulawa kwabazali yase ishova ejele u-Astrid Tavira, 20, olahlwe yicala lokwakha itulo lokubulala unina, kubika iThe Mercury.
UTavira walahlwa yicala ngenyanga kaSepthemba, ngemuva kokutholakala enecala lokwakha itulo lokubulala unina uFreda.
Umama, 50, wadlwengulwa wase eklinywa esemzini wakhe, ngo-Agasti ngonyaka owedlule, isoka likaTavira uWaleed Karriem, 34, ophinda abe ngumzala wakhe, wavuma leli cala lokubulala wase egwetswa udilikajele.
Ekuvumeni kwakhe icala, watshela inkantolo wathi uTavira wakha itulo ngoba efuna ifa likanina, bese ekhokha izikweleti zakhe.
UTavira uthe wavuma wathi "yebo " ngesikhathi isoka lakhe libuza ukuthi uyafuna yini libulale umama wakhe, uthe wabe ecabanga ukuthi liyadlala.
“Umama wakho wadlwengulwa wabulawa, wawumazi uKarriem ukuthi ungumuntu onodlame kodwa awenzanga lutho ukusiza umama wakho. Umphakathi ukhathele yizingane ezibulala abazali, ufanelwe yizigwebo esiqinile," kusho iMantshi uNanette Otto.